4 Daaweyn Kale oo Lagu Xakameeyo Snant - U hagaajinta Caafimaadkaaga - TELES RELAY
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah »4 Daawooyinka Kale ee Lagu Xakameeyo Snant - U hagaajinta Caafimaadkaaga
4 Daaweynta Kale ee Lagu Xakameeyo Snant - U hagaajinta Caafimaadkaaga
Xakamaynta snoring ee sida dabiiciga ah waa hadafka, maahan kaliya kuwa dhibaatadaas qaba, laakiin gaar ahaan kuwa lala seexdo. Intaa waxaa dheer, Cuncunka maalinlaha ah wuxuu xiriir la leeyahay dhibaatooyin kale oo caafimaad, sida cudurrada wadnaha ama dhibaatooyinka neef-mareenka.
Maqaalka, waxaan kugula wadaagi doonnaa daaweyn kale oo kale oo hantidooda la bartay inkastoo isticmaalkooda, xaaladaha qaarkood, ay ku saleysan yihiin sifo aan caadi aheyn. Si kastaba ha noqotee, iyaga oo ku mahadsan, waxaan si guul leh u xakameyn kayn karista iyo ka fogaanshaha kuwa kale, xulashooyinka faafa badan.
Snnakker waa natiijada iska caabbinta marinka hawada maraya sambabada iyo waliba astaamaha dhibaatooyinka neefsashada. Markay tahay qaylo dheer, waxaa loo arkaa inay tahay hurdo xumo.
Sanado badan, qalliinku waa daaweynta dhabta ah ee xaaladan. Waxay ka kooban tahay kicinta korantada ee muruqyada dilator ee mareenka sare ee neefsashada.
CPAP si loo xakameeyo quudinta
CPAP waa a aaladda cadaadiska hawo mareenka joogtada ah ee joogtada ah. Dhakhtarku wuxuu qoraa qalabkan si loo daaweeyoapnea hurdada iyo, sidaa darteed, sidoo kale in la xakameeyo snoring.
Cutubkani wuxuu isticmaalaa cadaadis hawo si uu u cadaadiyo carrabka oo u furo hunguriga si hawadu ay si fudud uga gudubto. Si kastaba ha ahaatee, Nidaamkani wuxuu sidoo kale yeelan karaa waxyeelo.
Eeg sidoo kale: Carruur xannuun badan oo hurdo la’aanta ah
Daaweynta Kale ee Lagu Xakameeyo Cunida
1. Cunto ku yar sodium
Marka hore, in kasta oo cilmibaadhistu wali ka maqan tahay, cunno hooseeya soodhiyam oo hodanka ku ah cunnooyinka lagu nadiifiyo ayaa la soo jeedinayaa. Waxay faa'iido u leedahay in la xakameeyo snoring maxaa yeelay waxay yareyn doontaa dareeraha jirka, ee la xiriira xanuunka neefta ee sii xumaanaya.
Waqtiga jiifka, dheecaanadan waxay ka socdaan lugaha una gudbaan qoorta. Sidaa darteed, dagaalka ka dhanka ah haynta biyaha waxay kaa caawin karaan ka-boodinta tuugada. Tilmaamaha soo socda ayaa la soo jeedinayaa:
Cusbo ka jooji cuntada
Masaacadaha ku udgoon dhir udgoon,geedo udgoon, toon, basasha, liin, iwm.
Ha haysanin cunnooyin la warshadeeyey, sida suugada, maraqa, soseelka, keydinta, maraqa soy, jiiska, iwm.
Kordhinta isticmaalka miraha, saladhka iyo khudradda guud ahaan
2. Caanood, cajiin iyo toon
Marka labaad, waxaan kuu soo jeedinaynaa saddex cunto oo dawooyin ah oo lagu kala sooco sifooyinkooda anti-bararka: sinjibiil, digaag iyo toon. Iyaga oo si joogto ah u cunaya, ayaa caabuq ku dhaca marinnada hawo mareennada ee daneyn kara kuwa aad u wanaagsan.
Cuntooyinkaan waa lagu dari karaa cuntadayada ama loo qaadan karaa kaabis. Intaa waxaa dheer, iyagu waa antioxidant awood leh iyo dawooyin muuqaal ah Taasi waxay naga caawin doontaa inaan horumarinno caafimaadkeena guud.
Daaweynta kale ee sadexaad ee lagu xakameeyo cunida waxay noqon kartaa a magnesium dheeri ah. Macdantaani waxay cadeysay inay waxtar leedahay si loo dheellitiro nidaamka neerfaha, loo yareeyo bararka loona hagaajiyo tayada hurdada, ka mid ah wanaagga kale.
Si kastaba ha noqotee, kabitaankan waa inay la socotaa horumarinno kale oo xagga cuntada iyo hab-nololeedka ah si aan u aragno horumar. Intaa waxaa sii dheer, waxaan had iyo jeer kugula talineynaa qaadashada kaabis hoos imaad kormeer caafimaad.
Sidoo kale akhri: Magnesium, macdan dhammaystiran
Hypnotherapy waa nooc ka mid ah teraabiyada cilminafsiga ee adeegsata habab hagitaan ah oo nasasho iyo feejignaan xoog leh. Ilaa goor dhow, waxaa loo istcimaalay daaweyn kale oo loogu talagalay khamriga iyo si loo dardargeliyo luminta miisaanka.
Si kastaba ha noqotee, cilmi baaris ayaa muujisay in farsamadan hypnosis-ka ay ka caawin karto qofka inuu ka soo jeesto goorta ay bilaabaneyso snuuq. Waxay ku gaari laheyd tan iyada oo ku celcelinaysa isku-buuqida iyo, waqti kadib, waxay yareynaysaa xoojinta iyo mudada sinta.
Daaweynta aan xakameynin cuncunka
Maanta, waxaan heli karnaa aalado ama alaabo badan oo ballan qaada inay naga caawinayaan inaan xakameyno cuncunka si fudud oo dabiici ah. Iyagu waa kuwa jirraba maxaa yeelay waxay ballan qaadayaan natiijooyin deg deg ah iyo guud ahaan qiimo fiican. Si kastaba ha ahaatee, Xaaladaha badankood, waxtarkooda lama soo bandhigin.
Qaar ka mid ah alaabooyinkaani waa:
Jilaacyada lidka-ilaalintooda leh elektarooniyo.
U buufin si loo baabi'iyo socodka sanka badan, kaas oo shaqeyn kara laakiin kaliya haddii ay dhacdo miyir beel sababtoo ah sanka oo ciriiriga ku jira howlaha kaankarada.
Nabarrada sanka si ay u furto sanka, taas oo ficil ahaan kaliya ah laakiin aan ku dhisnayn jilicsanaanta, sidaa darteed waxay sidoo kale la xiriiraan kiisaska ciriiriga sanka.
Hadda, waxaan ognahay qaar ka mid ah ikhtiyaarada dabiiciga ah ee lagu xakameynayo snoring. Samaynta qaar ka mid ah isbeddelada cuntadeena waxay noqon kartaa caawinaad weyn, iyo sidoo kale fursadda lagu isku dayo hypnotherapy iyo magnesium kaabis. Intaa waxa u dheer, waa in aynaan illoobin muhiimadda dagaalka lagula dagaallamayo buurnida iyo la dagaallanka sigaar cabista.
Tilmaamaha 6 ee kaa caawin doona inaad si fiican u seexato
Seexashada hurdo wanaagsan waa baahi muhiim ah. Taasi waa sababta aan halkan kuugu kugu casuumeyno si aad u ogaatid qaar ka mid ah tilmaamaha hurdo fiican ka dib maalin mashquul ah. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/4-traitements-alternatifs-pour-controler-le-ronflement/
Saliida loo yaqaan 'Castor oil': talooyinka iyo waxyaabaha ka hortaga uurka - Hagaajinta Caafimaadkaaga